Linux & Tapas 2017: iyo inonakidza chiitiko inodzoka muna Chivabvu 6 | Linux Vakapindwa muropa
Linux & Tapas 2017: iyo inonakidza chiitiko inodzoka muna Chivabvu 6
Gore rakapera isu takatozivisa chiitiko ichi Linux uye Tapas pane yedu blog. Sezvaunenge uchitoziva, chiitiko chinoitirwa muLeón (Spain), uye icho chinobatanidza zvakanakisa zvepasoftware yepasirose seyakanakisa gastronomy yedu, uye ndicho chikuru chakasarudzika chemafafitera se tapas. Nekudaro, LyT inofamba ichibva pane zvimwe zviitiko zvechivanhu kana misangano, ichipawo chikamu chakakosha chevaraidzo kune avo vanoda kunwa, kudya nekunakidzwa vachigovana ruzivo ...
Iyo Linux & Tapas chiitiko mune yayo 2017 edition, zvichaitika musi waMay 6. Chirongwa chausingakwanise kupotsa. Mu zviri pamutemo webhusaiti yechiitiko iwe unozokwanisa kuwana rumwe ruzivo, kuwedzera kune nyorera kuenda kana iwe pakupedzisira wafunga kushandisa zuva rakanaka uchinakidzwa nemafaro ezvekudya nemadzitateguru echikafu chakabatana neiyo yepamusoro tekinoroji uye komputa software yekuvandudza.
Chiitiko chakakodzera chete gourmet geeks yehunyanzvi, umo mavanonyatso kuremekedza rusununguko rwako, zvese kunze nekunze kwemakomputa Zvakare, sekutaura kwandakaita mune rapfuura gore, kana iwe ukafunga kuenda kuLyT17 hauzove asina hanya. Iwe unozogona kunakidzwa neshoo dzakanangana nenyika yepachena software uye panguva imwechete unakidzwa nenhoroondo irimo mune inoyevedza dhorobha rekare reLeón, kwaunogona kudya nekunwa.
Kuti uzviwane zvakanyanya, unogona kutarisa mepu, asi ini ndato kukuudza izvo LyT17 zvichaitika, senge pazviitiko zvakapfuura, mutaundi rekare reLeón, mune inozivikanwa Humid nharaunda. Ndataura izvozvo, kubva kuLxA Tinogona chete kumirira iyo nguva, uye kukurudzira vese vedu vaverengi uye FOSS / FLOSS vadikani kuti vapinde muchiitiko ichi. Chokwadi hauzozvidemba, uye usakanganwa kunyoresa kuitira kuti vagone kuronga chiitiko uye kuti kuvepo kwako kutonyanya kunakidza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Linux & Tapas 2017: iyo inonakidza chiitiko inodzoka muna Chivabvu 6
Nzira yekuita yako sevha yeVPS mugore
Yekutanga Linux kernel 4.11 yekuburitsa mukwikwidzi yave kuwanikwa